'The Sandman' Audio Series Ho avy amin'ity fahavaratra ity avy amin'ny Audible sy DC
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'The Sandman' Audio Series Ho avy amin'ity fahavaratra ity avy amin'ny Audible sy DC
by Waylon Jordan March 4, 2020 849 hevitra
Andian-tantara tantara an-tsary nataon'i Neil Gaiman, Ny Sandman, dia mpankafy mpankafy hatramin'ny namoahana azy tamin'ny 1989, ary amin'ity fahavaratra ity dia hanana fomba vaovao hankafizan'ireo mpilalao ireo ny mpankafy amin'ny tantara an-tsary vaovao avy amin'ny Audible sy DC Comics notantarain'i Gaiman tenany ihany.
Notarihin'i Dirk Maggs, ny fampifanarahana dia hanisy famolavolana feo feno feo sy feo manankarena sy miroboka araka ny fampitam-baovao voarainay. Maggs dia niara-niasa tamin'i Gaiman teo am-pamoronana adaptation audio an'ny Ny Anansi Boys, Omens tsara, Na aiza na aiza, ary Stardust.
Rehefa manandrana maka ny fisehoana ara-batana amin'ny Fahafatesana amin'ny varotra ho an'ny fiainana mandrakizay ny okultista, dia namandrika azy tamin'ny fomba diso kosa i Morpheus, zandrin'i Death, ilay Mpanjakan'ny nofy. Taorian'ny nigadrany fitopolo taona sy ny fahafahany nandositra, dia nitady izay hamerina ireo zavatra very very nananany i Morpheus ary hanangana ny fanjakany. The Sandman manaraka an'i Morpheus, sy ny olona ary ny toerana voakasik'izany, rehefa manandrana manarina ny hadisoana cosmika sy olombelona nataony nandritra ny fisiany tsy misy farany izy.
Gaiman dia nandray anjara tamin'ny dingana rehetra tamin'ny dingana, nitondra Ny Sandman amin'ny fiainana am-peo miaraka amin'i Maggs.
"Efa ho 30 taona lasa izay, Dirk Maggs dia nanatona ny DC momba ny fampifanarahana Ny Sandman ho endrika audio. Tsy nisy izany (na dia teo aza ny fomba niampitanay voalohany an'i Dirk) ary faly aho fa tsy nisy izany, satria ao anatin'ny Golden Age amin'ny tantara an-tsehatra isika izao, ary tsara kokoa izahay sy Dirk amin'izay manao izahay, ”hoy i Gaiman tao anaty fanambarana iray. “Ity dia fampifanarahana amina rakipeo Ny Sandman Novels sary, namboarin'i Dirk Maggs tamim-pahamendrehana, niaraka tamin'ny mpilalao kintana rehetra. Tiako ny teo mba hiresaka casting, any mba hamaky ny script ary hanolotra torohevitra indraindray, ary any amin'ny studio, mijery majika vita tanana ary mirakitra ny fitantarana. Tsy afaka miandry aho mandra-pandren'izao tontolo izao ny nataontsika. ”
“Ity fandefasana feo an'ny Ny Sandman lehibe eo amin'ny sehatra sy ny hetaheta ary miorina amin'ny fanamarihana sy script nataon'i Neil tany am-boalohany ho an'ny andiany DC malaza. Ny famokarana ataonay dia miditra lalina ao amin'ny eritreritr'i Neil, toy ny hoe manoratra ireo tantara ireo eo akaikinay izy, mamoaka ny antsipirihany sy ireo singa vitsivitsy mbola tsy fantatra hatreto, ”hoy i Maggs nanampy. “Ny audio dia mampiavaka ny sary an-tsain'ny mpanakanto tantara an-tsary ary ny famirapiratan'i Neil amin'ny famoronana, raha toa kosa ka manome ampaham-pihetseham-po vaovao ny mpilalao mahatalanjona sy ny mozikan'i Jim Hannigan. Ity fe-potoana fampidirana am-polom-bolo taona ity dia mendrika isa-minitra niandrasana. Io no tena fototr'ilay Sandman an'i Neil Gaiman. ”
Ny Sandman fananana mafana nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny fanandramana maro hanaraka, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy nahomby - nampandrenesina vao tsy ela akory izay Netflix dia nisafidy ny fampifanarahana an-tsary ny tantara–Koa ho fitsinjovana manokana ho an'ny mpankafy ny miaina ity fampifanarahana manokana ny sanganasan'i Gaiman ity.
Azonao atao ny mijery AUDIO CLIP ho an'ireo andiany vaovao amin'ny alàlan'ny MANDRAKARIVA.
Tsy mbola misy teny momba ny fandefasana ireo andiam-peo. Ny fizarana voalohany an'ny Ny Sandman dia ho azo alaina amin'ny fahavaratra 2020 amin'ny teny anglisy miaraka amin'ny famoahana manaraka amin'ny teny frantsay, alemà, italianina ary espaniola.